Booliska oo bilaabay inay Muqdisho ku beegsadaan qaadka Kenya laga keeno – AfmoNews
Booliska oo bilaabay inay Muqdisho ku beegsadaan qaadka Kenya laga keeno
Ciidamada Booliska Dowladda Federalka Somaliya ayaa bilaabay inay beegsadaan doomaha qaadka sida dhuumaaleysiga loogu soo galiyo Magaalada Muqdisho, xilli wali xayiraad uu saaran yahay qaadka laga keeno dalka Kenya.
Ciidamo badan oo Booliska Haramcad ah ayaa la dhigay Xeebta deegaanka Jazeera, halkaasi oo doomaha qaadka si dhuumaaleysi ah uga soo dagi jireen, kadibna gaadiid lagu soo qaadi jiray.
Shalay deegaanka Jazeera ayaa waxaa ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay maleeshiyaad halkaasi joogay oo doomaha qaadka lacag ka qaadan jiray & Ciidamada Booliska oo hawlgalka waday.
Sidoo kale Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku dhigay gaadiid lagu waday qaadka laga keeno dalka Kenya, kadib markii si dhuumaaleysi ah looga soo dajiyay dhanka Xeebta Ceelmacaan, islamarkaana gaadiid lagu soo qaaday, balse Booliska ay ku qabteen Xaafado ka tirsan Degmada Heliwaa.
Iyadoo Booliska beegsigaasi ay ku hayaan qaadka laga keeno dalka Kenya, ayaa haddana si caadi ah wadooyinka Muqdisho, waxaa loogu iibiyaa qaadka laga keeno dalka Itoobiya.
Lama oga sababta dowladda Somaliya u xanibtay qaadka Kenya oo ay u fasaxday qaadka laga keeno dalka Itoobiya.